India : Adi-hevitra Manodidina ny Famonoana ho Faty Noho ny Fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2012 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Ελληνικά, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Delhi, sy ny fiantsoana azy mampiahiahy ho ‘renivohitry ny fanolanana’ no nanatri-maso indray ny fanaovana an-keriny vehivavy 23 taona (jereo ny tatitry ny Global Voices), izay niteraka fihetsiketseham-panoherana goavana tao an-drenivohitra sy nanerana ny firenena. Noho ny fahasosorana tamin'ny herisetra farany teo, nitaky ny hahahentitra kokoa ny lalàna sy hanenjanana ny fanasaziana ho any amin'ny faratampony ho an'ny mpanao an-keriny ny olona avy amin'ny sehatra samihafa, mpikambana ao amin'ny Parlemanta Sushma Swaraj no nanentana voalohany ny fitakiana.
Sarotra ny miresaka momba ny fanolanana sy ny didy famonoana ho faty. Namoaka isa mampitampim-bava momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny Birao Nasionaly misahana ny adi-heloka bevava ao India. Tamin'ity taona ity ihany, maty tao Dehli noho ny fihoaram-pahefana ny zazakely roa taona antsoina hoe Baby Falak. Misy endrika isan-karazany ny herisetra atao amin'ny vehivavy: famonoana ny zazarano vavy, fampijaliana an-tsekoly, fanorisorenana, fitakiana fanaka rehefa hivady, fanaovana an-keriny (misy ny tranga sasany heverina ho manara-penitra ao amin'ny fiaraha-monina). Misy fanjakana ao avaratra atsinanan'i India antsoina hoe Manipur efa nahitana fanaovan'ny miaramila ao aminy ankeriny ny vehivavy nanao fihetsiketsehana niaraka tamin'ny sora-baventy hoe , “Miaramila Indiana: Aolàny Izahay.” Ao amin'ny mpikambana parlemantera aza dia 369 no miatrika fiampangana ho nanao heloka bevava tamin'ny vehivavy.
Tanora mpanao fihetsiketsehana iray mitabataba fatratra manondrotondro ireo polisy nandritra ny fihetsiketsehana nanaraka ilay fanolanana faobe nihatra tamin'ny vehivavy iray tao amin'ny bus-n'i Dehli. Sarin'i João Costa Leão. Copyright Demotix (23/12/2012)
Ao anatin'izao fahasarotana iainan'ny fiaraha-monina sy ny fielezan'ny fihoaram-pahefana fatratra izao, nandeha ny fanentanana faobe ao amin'ny tambajotran-tserasera ary navaivay ny adi-hevitra momba ny fampamonoana ho faty izay ahitana fanangonan-tsonia an-tserasera.
Tsikerain'i Stalin K Padma ny gazety iray (Times of India) manandratra ny fampamonoana ho faty,
Indrisy fa mbola misy hatrany ny mametrapetraka fa vita hatreo ny fiainan'ny vehivavy iray aorian'ny fanolanana nihatra taminy ! Ny fanilikilihana noho ny fanolanana sy ny fomba fisaina arangaranga tahaka izany no tena mahatonga ny vehivavy hamono tena.
Izay amoahan'i Sakshi Soi ny isan'ny tranga ao amin'ny tanànan'i Delhi irery:
Efa niady hevitra momba izany isika tany aloha, sa tsy izany ? Tsy io no fanolanana voalohany nitranga tetoDelhi na India. Mihoatra ny 600 ary mbola mitohy raha ho an'ny tanànan'i Delhi irery ! Firy ny voasazy ? Mitaky ny famonoana ho faty izahay satria mila fepetra eo noho eo !
Hetsi-panoherana eo am-bavahadin'i India. Sary avy amin'ny mpisera Flickr ramesh_lalwani CC BY-NC 2.0
Mamoaka ny heviny i Aswathy Senan izay efa niantso sy nandray anjara tamin'ny fihetsiketseha-panoherana:
Manantena aho fa tsy ho tonga amin'izany dingana izany isika ka hikarakara fihetsiketseha-panoherana hafa ho fanoherana ny fampamonoana ho faty !!! Tsy misalasala aho manondro ny fampahalalam-baovao ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny fampamonoana ho faty ho fanasaziana ny mpanao an-keriny
Suresh Kumar miady hevitra amin'ny mpanohana sy ny mpanohitra ny fampamonoana ho faty ao amin'ny habaka Google Plus:
Mampisalasala ihany raha ny famoana ho faty no fepetra mahasakana kokoa noho ny lalàna misy ankehitriny. Miadam-pandeha loatra ny rafi-pitsarana ka raha mivoaka amin'izao fotoana izao ny didy mampamono, dia mihoatra ny 40 000 ny isan'ny olona mbola hotsaraina. Mbola azo tanterahina ve izany? Noho izany mila mieritreritra isika amin'ny dingana sy ny fepetra ilaina ao anatin'ity fiaraha-monina ity hampitsaharana ity zava-maharikoriko ity tsy hitranga intsony.
Raha mbola mandeha ny adi-hevitra momba ny famonoana ho faty, namoaka sata arahina sombin-gazety heverina ho mamaly izao herisetra mihatra amin'ny vehivavy izao i Nirmal Harindran.
Zazavavy nariana tao Delhi
Mieritreritra aho fa io no fiandohan'ny olana… The Indian Express, Dehli 19 desambra 2012